Wararka ka daawo Muuqaalka! | Smore Newsletters for Education
U heellan sii kordhinta nolosha ardaydeena.
Waxaan maanta kula soo xiriireynaa si aan kula socodsiino, oo aan uga warqabno shaqada la qabanayo ee lagu horumarinayo nolosha ardayda Dugsiga Dhexe ee North View. Cusboonaysiintaan waxay kakoobantahay macluumaad kusaabsan yoolalka dugsigeena ee tilmaamida iyo hanashada, waxqabadyada loo isticmaalay in lagu gaaro hadafyadaas iyo horumarka aan ka gaarnay ujeedooyinkaas. Arrintaan, waxaa lagu siin doonaa macluumaad la xiriira:
Video-keena Soo Dhawaynta Ah
Fursadda Ka Hortagga Fasalka 6aad
Golaha La-talinta Qorshaynta Degmada (DPAC)
Xerada Bootka ee Chromebook
Shirarka Waalidka / Macallinka
Talooyin u soo dir ardaygaaga.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid arrintan ama wax kale oo la xiriira Dugsiga Dhexe ee North View, fadlan ila soo xiriir halkan. Waxaad sidoo kale la socon kartaa taariikhda adoo raacaya @NVMSPrincipal ama aad jeceshahay boggayaga Facebook adoo gujinaya halkan.
Kusoo Dhawoow Video
Dugsiga Dhexe ee North View waxaan aaminsanahay in wax barasho muhiim ahi aysan dhici karin haddii uusan jirin xiriir muhiim ah. Aaminsanaantan darteed, ardaydeenu waxay ku qaateen waqti aad u fara badan usbuucyadii u horreeyay ee dugsiga iyagoo la shaqeynayay hoggaamiyeyaasha ardayda iyo shaqaalaha inay xiriir dhab ah ka dhexeeyaan midba midka kale, inay bartaan in dadka dugsiga jooga ay daneeyaan iyaga, ayna bilaabaan inay horumariyaan jawiga wanaagsan ee dugsiga. iyo dhaqanka taageera dhammaan xubnaha bulshada.
Hal dariiqo oo aan taas ku sameyn karno waa annagoo si firfircoon u barinna waxyaabaha laga filayo ardayda. Dib ufiiri fariinta soo dhaweynta ee hoos ku xusan oo tilmaamaysa macluumaadka ku saabsan qorshaha diyaarsanaanta ardayda 'Covid-19'.
Marka la eego welwelka bulshada sii wadaya ee la xiriira CUDURKA 19-aad ee Faafa, North View Middle School ayaa looga baahan yahay inay marti galiso khibrad shirar isweydaarsi ah oo loogu talagalay qoysaska si ay ula falgalaan labada Arbaco, Oktoobar 14, iyo Talaadada, Oktoobar 22nd. Inta lagu jiro waqtigan waxaad awoodi doontaa inaad:
La kulan macalinka latalinta ardaygaaga.
Dib u eeg ujeeddooyinka iyo yoolalka fasalka.
Kala hadal sida uu ardaygaagu ugu horumarayo mid kasta oo ka mid ah fasalladooda.
Qoysaska kaqeyb gala waxay awoodi doonaan inay galaan ardaygooda / ardaydooda tartanka loo qaban doono Jimcaha, Oktoobar 30ka.
Fadlan isticmaal iskuxiraha halkan laga helo si aad isuqorto. Macallinkaaga shirarka ayaa kula socon doona usbuuca Oktoobar 12 si uu u xaqiijiyo waqtigaaga oo uu kuu siiyo tallaabooyinka xiga. Haddii aadan awoodin inaad ka soo qeybgasho ama aad jeceshahay inaad aragto ardaygaaga horumarka ardaygaaga kahor, fadlan soo gal Schoology ama ParentVue.
Sixth Grade AVID
Iskuulka Dhexe ee North View ayaa hada qoraya ardayda fasalka 6-aad ee fasalka 6-aad ee baaritaanka AVID. AVID (Advancement Via Individual Determination) waa nidaam iskuulka dhexdiisa ah oo taageero ah, oo loogu talagalay ardayda oo dhan, taas oo u heellan horumarinta hoggaamiyeyaasha dugsiyadooda, bulshada, iyo bulshada. Fasalka Baadhista ee AVID ayaa ardayda ku xujeeya inay ogaadaan go'aan shaqsiyeedka ay leeyihiin iyagoo siinaya xirfado waxbarasho, xirfadaha qaadashada xusuusta, maaraynta waqtiga, abaabulka, iyo xirfadaha akhriska iyo qorista. Intaa waxaa sii dheer, ardayda AVID waa inay ku dhiirrigeliyaan inay wax ka bartaan oo ay raacaan fursadaha waxbarasho iyo xirfadeed ee dugsiga sare kadib.
Baaritaanka AVID wuxuu diiradda saarayaa waxyaabaha soo socda:
U Diyaargarowga Kuleejka iyo Shaqada
Wixii su'aalo ah iyo inaad barato sida loo codsado barnaamijka, fadlan la xiriir AVID ExploratoryTeacher, Ms. Mulvahill, wixii su'aalo ah.
Dib u dhaca ku yimid bilowga dugsiga, maalinta sawirka North View ayaa sidoo kale dib u dhigi doonta. Maalmaha sanadka ee sawirka waxaa loo qorsheeyay Arbacada, Nofeembar 4, iyo Khamiista, Nofeembar 5.
Xidhiidhada hoose waxay ku geynayaan macluumaadka lala wadaagay ardaydaada dhowaan oo qayb ka ah barnaamijkeena Chromebook Bootcamp. Xor ayaad u tahay inaad dib u eegto xiriiriyeyaasha si aad wax badan uga barato ilaha farsamada ee ay heli karaan ardaydaada.
Dugsiga Dhexe ee North View waxaan aaminsanahay in ardaygeenna waxbarashadiisu aysan dhammaanayn marka jalaska dugsiga la yeerto. Aaminsanaantan darteed, waxaan jeclaan lahaa inaan kula wadaago kheyraad kaa caawin doona inaad buug weyn ku dhigto gacanta ardaygaaga. Halkan guji si loogu qaado bogga loo yaqaan 'North View Reads Instagram' ee ay sameysay Marwo Sirovy.
Ma xiiseyneysaa taageerida shaqada degmada iyo Dugsiga Dhexe ee North View? Hadday sidaas tahay, waalidiinta / ilaaliyeyaasha North View Middle School waxaa laga codsanayaa inay tixgeliyaan u adeegidda wakiillada daneeyayaasha koox muhiim ah oo la-talin ah. Fadlan tixgeli fursaddan si aad ula wadaagto aragtidaada.
Degmadu waxay ka codsaneysaa laba waalid mid kasta oo ka socda dugsi hoose iyo seddex waalid oo ka kala socda mid kasta oo ka mid ah dugsiyada dhexe iyo sare si ay uga mid noqdaan Golaha La-talinta Qorshaynta Degmada (DPAC) Golaha La-talinta Qorshaynta Degmada (DPAC) wuxuu siiyaa bulshada iyo shaqaalaha ISD 279 kaqeybgalka qorsheynta iyo qiimeynta barnaamijyada waxbarida ee hadda jira. Xubinnimada DPAC waxay ku saleysan tahay daneyn, ee ma ahan khibrad waxbarasho. Kulamadu waxay dhacaan 6:00 ilaa 8:00 p.m taariikhaha hoose:
April 27 (Bandhigga Gudiga Dugsiga)
Kulamada waxaa lagu qaban doonaa si caadi ah iyada oo loo marayo Google Meet, Xarunta Adeegga Waxbarashada (11200 93rd Ave North, Maple Grove), iyo Qolka Madasha ee Park Center Senior High School. Guddi-hoosaadyadu markay ikhtiyaarkooda qaataan, waxay ballansan karaan shirar dheeri ah ama sii dheereyn karaan kulankooda. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan si xor ah u soo booqo xiriiriyahan degelkeena degelkeenna. Haddii aad xiiseyneyso inaad wakiil noqoto, fadlan buuxi foomkan dalabka.
Fadlan wax yar dib u eeg si aad u eegto Buug-gacmeedka Waalidka/Ardayga ee sannadkan. Buug-gacmeedkan waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto barashada arday kasta iyo waalidkiis ama waalidkeed ama ilaaliyeha waxyaabaha laga filayo dugsiga.
Siyaabaha Loo Sii Wado Cusbooneysiinta
Warsidaha Billaha ah
Bilowga bil kasta, Dugsiga Dhexe ee North View ayaa kuu soo diri doona "News ka Muuqaalka" Warsidaha Qoyska. Wargeysyadan waxaa loo abaabulay qaab ah in macluumaadka ugu xasaasisan uu yahay midka ugu sarreeya isla markaana markii aad hoos ugu sii degto warsidaha ay macluumaadku noqdaan kuwo ku wajahan mustaqbalka. Kani waa "dukaanadaada hal-joogsi" ah si aad ula socotid waxa ka dhaca bulshada dugsigeena.
Bogagga Facebook ee Luuqadaha Badan Ku Hadla
Bogagga Facebook ee luqadaha badan ku hadla ee hoos ku taxan waa halka aad ka heli karto ilo, warar iyo macluumaad, oo ku qoran luqado badan, oo ku saabsan ISD 279 Osseo Area School.
Qaab kale oo lagu helo macluumaadka shaqsi ahaaneed loona hawl galo wadahadallo la xiriira bulshada Dugsiga Dhexe ee North View ayaa ah kaqeybgalka shirarka waalidka-macalinka ee seddexdii biloodba mar. Kaliya maheli doontid inaad lakulanto macalinka ilmahaaga, laakiin sidoo kale waxaa jiri doona fursado aad na siiso jawaab celin kusaabsan baahiyahaaga. Dugsiga Dhexe ee North View waa beel firfircoon; haddii aad rabto inaad ka qayb qaadato oo aadan aqoon sida, fadlan weydii. Waxaan kugu xiri karnaa sabab, ficil, ama qof kaa caawin doona inaad ku xirnaato beesheena.
Websaydhka NVMS waa meel loo baxo si loo jiido macluumaadka joogtada ah, xaqiiqooyinka ku saabsan Dugsiga Dhexe ee North View oo muhiim u noqon kara qoys xilli kasta oo sannadka ka mid ah. Tan waxaa ka mid noqon kara laakiin aan ku xaddidnayn, jadwalka maalinlaha ah, kalandarka dugsiga, sida loo hubiyo darajooyinka ardaygaaga iyadoo la adeegsanayo Waalidka Vue, oo lagula socodsii ardaydaada inay ka fogaadaan horumarka waxbarashada iyagoo adeegsanaya Schoology.
Waxaad sidoo kale la socon kartaa taariikhda adoo raacaya @NVMSPrincipal ama aad jeceshahay boggayaga Facebook adoo gujinaya halkan.
Maxaad sameyneysaa si aad u hubiso in si nabadgelyo leh loogu soo noqdo sanad dugsiyeedka?
Fadlan halkaan riix halkaan #279ReadytoRestart plan.
Goorma ayuu dugsigu furmayaa?
Dhismaha iskuulku wuxuu u furi doonaa ardayda inay galaan maalin walba 7:50 am. Waxaan codsaneynaa in qoysaska aysan iska dhaafin ardayda waqtigaan kahor si ay uga fogaadaan jameecada kooxaha ardayda badan ee dhismaha hortiisa kahor bilowga maalinta iskuulka.
Waxaan u baahanahay taageero Ilaha Internetka.
Kheyraad ayaa loo heli karaa si loogu taageero qoysaska aan marin ku lahayn internetka guryahooda waa laga heli karaa halkan. Waxaan sidoo kale soo diri doonnaa agabyadan maadaama ay diyaar u yihiin qaybta COVID-19 ee degelka degel.
Ardayda miyaa looga baahan yahay inay xidhaan wejiga daboosho iyo masaafada bulsho ee dugsiga?
Haa. Dhamaan shaqaalaha iyo ardayda (xanaanada iyo wixii ka weyn) waxaa laga rabaa inay xidhaan wejiga. Kala fogeynta bulshada ayaa waliba laga hirgalin doonaa dhammaan dhismaha markii ardayda iyo shaqaalaha dhismaha ku jiraan.
Kani waa sanadkeygii toddobaad ee aan u maamulo maamule Dugsiga Dhexe ee North View. Kahor imaatinka North View, inbadan oo kamid ah xirfadeyda xirfadeed waxaan kusoo qaatay iskuulada aagga Osseo, oo lix kamid ah lagu qaatay kaaliyaha Maamulaha Osseo Senior High. Intaas ka hor, waxaan waqti ku qaatay Dean of Ardayda Dugsiga Sare ee Richfield iyo macalinka heerka dugsiga sare ee Sayniska iyo hormoodka habdhaqanka nidaamka iskuulka dadweynaha ee Minneapolis
Intii aan joogay Minneapolis, waxaan shan sano oo cajiib ah ku qaatay barashada heerka dhexe ee Sayniska Lincoln Community School iyo Anishinabe Academy ilaa fasalada lixaad, toddobaad iyo sideedaad, iyo laba sano oo aan ku bixinayay taageero tacliimeed iyo dabeecad inta aan ku shaqeynayay diin. Waaya-aragnimadayda hore waxay qaabeeyeen caqiidadayda aasaasiga ah iyo falsafadda waxbarashada. Aniga ahaan, dugsiyadu waa inay ahaadaan qayb muhiim ah bulshada ay u adeegaan. Waa inay sidoo kale diirada saaraan rajooyinka sare ee ardayda oo dhan, iyo iyada oo loo marayo horumarka ku habboon iyo dhaqamada waxbarida ee xoogan, ardayda la siiyo aqoon, xirfado, iyo kalsooni ay u baahan yihiin si ay uga bataan filashooyinkaas.
Haddii aad jeceshahay inaad ila xiriiraan fadlan guji halkan. Waxaan jeclaan lahaa inaan war kaa maqlo!
Annaga, oo ah shaqaalaha Dugsiga Dhexe ee North View, waxaa naga go'an:
Bixinta fursado tacliimeed oo adag oo khuseeya, soo jiidasho leh, dhaqan ahaan ka jawaaba, oo adag.
Bixinta jawi macno leh, dhiiri gelin leh, iyo jawi ammaan ah oo kobciya cunugga oo dhan, oo diiradda saaraya awoodaha ardayga.
Oo ay kujiraan hababka ugufiican ee xog ku saleeysan iyo edbinta buuxisa baahiyaha tacliimeed iyo shaqsiyeed ee ardaydeena, waxay hagaajisaa hanashada ardayda, iyo kobcinta koritaanka.
Ka qeyb qaadashada sii wadida horumarka xirfadeed si loo hubiyo inaan ka warqabno aragtiyada jinsiyadeed ee ardaydeena, loolankeena eexashada, iyo in lagu daro dhaqamada u adeegaya ardaydeena kala duwan.
Bixinta iskaashi wax ku ool ah oo lala yeesho bulshada dugsiga oo dhan iyadoo la hubinayo in aan dhiirrigelino fursado badan oo ku lug lahaansho, xiriir, iyo helitaan. Moodelinta iyo hirgelinta maalin kasta ku lug lahaanshaha xeelado akhris iyo qoraal oo heerar kala duwan ah fasallada dhexdeenna.
Anaga oo aqbalna mas'uuliyada guusha arday kasta una dabaaldegno guushaas bulshada dugsigayaga.
Waxaa ka go'an in la sii wanaajiyo nolosha arday kasta iyadoo la adeegsanayo dhaqanka ugu fiican ee la heli karo.